कोरोना भाइरसबारेका सात हल्ला जसले मानिसलाई तनावग्रस्त बनाएको छ ! « Bagmati Online
कोरोना भाइरसबारेका सात हल्ला जसले मानिसलाई तनावग्रस्त बनाएको छ !
चीनको वुहान शहरबाट सुरू भएको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म संसारका ७९ देशमा फैलिएको छ । जुन गतिका साथ यो भाइरस फैलिइरहेको छ, वैज्ञानिकहरू भन्छन् : त्योभन्दा तिब्र गतिमा यो भाइरसबारेको अफवाह फैलिइरहेको छ। जसका कारण मानिसहरू आतंकित भइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार, त्यस्ता हल्ला-झुटा दावी, षड्यन्त्रको आशंका र गलत जानकारीमा आधारित छन् सामाजिक सञ्जालले ‘आगोमा घ्यूु थप्ने’ काम गरेको छ। यस आलेखमा, कोरोना भाइरसबारे चलेका ७ अफवाहलाई चिर्ने कोशिश गरिएको छ ।
हो, ब्लिच, इथानोल, क्लोरोफर्म लगायतका केमिकलमा भाइरस मार्ने गुण हुन्छ। तर, शरीरको बाहिरी भागमा मात्रै यसले प्रभाव देखाउँछ। कोरोना भाइरस शरीरभित्र छिरिसकेको रहेछ भने यस्ता केमिकलको प्रयोगले कुनै मद्दत गर्दैन। त्यस्ता केमिकलले उल्टै संवेदनशील अंगहरूमा क्षति पुर्‍याउन सक्छन्। सेनिटाइजर आदिले हात सफा गर्दा भने केही फाइदा अवश्य पुग्छ। घरेलु विधिबाट कोरोना निको पार्न सकिन्छ भन्नु हल्लाबाहेक केही होइन। अहिलेसम्म यसको भ्याक्सिन आविस्कार भएको छैन। वैज्ञानिकहरू अनुसन्धानकै क्रममा छन्।
तातोले कोरोना भाइरस मार्छ भन्ने कुरा तपाईंले सुन्नुभएकै होला। अथवा, अधिक तापक्रममा यो भाइरस बच्न सक्दैन भन्ने सुन्नुभएको होला। यो पनि हल्ला नै हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले भनेको छ, तातोमा हात सेकाउँदैमा भाइरस मार्दैन। उल्टै, ताप पैदा गर्ने विभिन्न उपकरणमा हात सेकाउँदा विकिरणहरूले छालामा असर गर्नसक्छ। वैज्ञानिकहरू तातो र कोरोना भाइरसको सम्बन्धबारे कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्।
यो हल्लाले डुबाउन सक्छ। कोरोना भाइरसले उमेर हेर्दैन, जसलाई पनि संक्रमण हुनसक्छ। यो हल्ला यसकारण चलेको हुनसक्छ कि यो भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने अधिकांश मानिस वृद्धवृद्धा वा पहिल्यैदेखि बिरामी थिए। यसको मतलब यो कदापि होइन कि केटाकेटीलाई संक्रमण हुनैसक्दैन। केटाकेटीलाई संक्रमण भएको कैयौं उदाहरण छन्। चीनमा त झन् नवजात शिशुलाई पनि संक्रमण भएको पाइएको छ।
हल्ला नं. ७ : भाइरस लागेपछि सकियो, संक्रमितको मृत्यु भइहाल्छ
यो पनि बिल्कुल नचाहिने कुरा हो। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी मृत्युदर २ प्रतिशतमात्रै छ। यसको अर्थको १०० जना संक्रमितमध्ये २ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। बाँकीमध्ये केही उपचाररत छन् भने केही निको भएर घर फर्किइरहेका छन्।
संक्रमितहरूमा खासगरी श्वासप्रश्वासको समस्या देखिने गरेको छ। रुघा, खोकी, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने र लगातार ज्वरो आदि यसका थप लक्षण हुन्। बलियो प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका केही मानिसमा यस्तो लक्षण देखिए पनि आँफै निको भएको समेत पाइएको छ भने कमजोर प्रतिरोधात्मक क्षमता भएकाहरूमा बढी असर देखिएको छ। अगावै श्वासप्रश्वासको समस्या भएकाहरूका लागि भने यो भाइरस घातक देखिएको छ। वैज्ञानिकहरू कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन संघर्षरत् छन्। सुरूमै भनियो, ७९ देशमा यो भाइरस फैलिएको छ। अहिलेसम्म ९२ हजार मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, मृत्युदर २ प्रतिशत छ। दुई प्रतिशत मृत्युदर पनि ठूलै चिन्ताको विषय हो।